यी हुन् निकै सुन्दर तर निकै खतरनाक डन अस्मिता, हेर्नुहोस् १० फोटो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी। कैयौं आपराधिक कार्यमा संलग्न अस्मिता भनिने यी युवती निकै सुन्दर छिन् । अस्मितालाई पहिलो पटक देख्नेले उनी अपराधी हुन् भन्ने विश्वसै गर्दैन । तर अस्मिता उर्फ भूरी गोहिल निकै खतरनाक अपराधी हुन् । प्रहरीका अनुसार उनीविरुद्ध कैयौं मुद्दा दर्ता छन् ।
यी युवती भारतको सूरतमा आपराधिका कार्यमा संलग्न छिन् । प्रहरीका अनुसार गुण्डाहरुसँग घुम्नु उनको सौख हो । उनी खुलेआम हतियार लिएर हिँड्ने गर्छिन् । उनको बन्दुक लिएर हिँडेको भिडियो होलीका बेला निकै भाइरल भएको थियो । प्रहरीले यी युवतीसँगै उनका दुई साथीलाई पक्राउ गरेको छ । यी तीनजनाले १ वर्षअघि मात्र दिउँसोमा बीच सडकबाटै एक मोटरसाइकल नै लुटेर लिएर गएका थिए । उनीहरुले हतियार देखाएर मोटरसाइकल लिएर फरार भएको बताइएको छ ।